धमाधम फिल्म गर्दै खगेन्द्र, बन्ने भयो गोपी ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > धमाधम फिल्म गर्दै खगेन्द्र, बन्ने भयो गोपी !
धमाधम फिल्म गर्दै खगेन्द्र, बन्ने भयो गोपी !
May 02, 2018 Nepali
आज राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी चलचित्र गोपी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
आरोही इन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण गर्न लागेको यो चलचित्रमा खगेन्द्र लामिछाने, सुरक्षा पन्त, अंकित खड्का लगायत कलाकारले अभिनय गर्ने भएका छन्, भने अन्य कलाकारहरु छानोट हुन बाँकी रहेको निर्माण पक्षले जानकारी गराएको छ ।
यो चलचित्रमा करिब दुई वर्ष पहिले घामपानी चलचित्र निर्देशन गरेका दिपेन्द्र लामाको कथा निर्देशन रहने छ, भने सामीप्या राज तिमल्सिनाले पटकथा संवाद लेख्ने काम गरेका छन् । चलचित्रले आफ्नै देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उठान गरेको बताईएको छ ।
हाल सम्म आफ्नै लेखन रहेको चलचित्रमा मात्रै काम गरीरहेका खगेन्द्र लामिछानेले यो चलचित्रबाट आफुलाई केही परिर्वतन गरेको पाईएको छ ।
विषयवस्तुले मन छोएकाले मात्रै यो चलचित्रमा काम गर्न लागेको बताउने खगेन्द्रले, सँगै सँगै घर चलाउनको लागी पनि पाए सम्म धेरै चलचित्रमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन् । उनको यो भनाईले कतै खगेन्द्र पनि राजेश हमाल,दयाहाङ्ग राई लगायतका कलाकारहरुकै पथमा लम्कीन खोजेका त होईनन्, ? भन्न प्रश्न उब्जिएको छ ।
आरोही केसी निर्मात रहेको यो चलचित्रमा श्रीधर पौडेल कार्यकारी निर्माताको रुपमा रहेको छन्, भने चलचित्रमा शैलेन्द्र डी कार्कीको छायांकन र निमेश श्रेष्ठको सम्पादन रहने छ ।